တရုတ် aerosol မှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အရည်အသွေးမြင့် floating aluminium pigment | မင်္ဂလာပါ
aerosol မှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်ဘို့အရည်အသွေးမြင့် floating လူမီနီယံခြယ်ပစ္စည်း
Aluminum silver paste 6um chrome plating effect အလူမီနီယမ်ငွေငါးပိဆေးသုတ်ခြင်းသည် floating non floating PAHs ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအဖြူရောင်အလူမီနီယမ်ငွေငါးပိကိုပြုလုပ်သည်။ Aluminum silver paste သည်ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဆိုးဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို floating type၊ floating non, electrodeposited silver, silver, electrodeposited silver, silver silver, perl silver silver မယ်၊ အလွန်ချောမွေ့။ ပါးလွှာသောဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးသေးငယ်သောအမှုန်အရွယ်အစားဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးခိုင်မာသည့်အရောင်နှင့်ကြည်လင်သောအရောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သိပ်သည်းဆနှင့်အဖြူရောင်ကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံလွှာသည်ကြော့ရှင်း။ နူးညံ့ပြီးမှန်ဘီလူးသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်မှန်ကဲ့သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် - အမှုန်အရွယ်အစား (၁၅၀-၄၅၀၀ ကွက်) ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်း - အပေါ်ယံ၊ မှင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ လက်မှုပညာ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ စက္ကူလုပ်ငန်း၊ အိမ်အသုံးအဆောင်များ၊ ကစားစရာများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များ - အလူမီနီယမ်ငွေပြားကို ၁ / ၂ ဖြင့်ပထမဆုံးစိမ်သည်။ -1 ဆေးသုတ်ဆေးအရည်၏ပမာဏထက်အဆ 1, ထို့နောက်ယူနီဖောင်းပြန့်ပွားတူသော slurry ဖွဲ့စည်းရန်ထို့နောက်အနိမ့်မြန်နှုန်းမှာနှိုးဆော်, ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းဗဓေလသစ်, အရည်ပျော်ပစ္စည်း, ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲရောနှောပြည်နယ်ထဲမှာထည့်သွင်း, ဘောလုံးကြိတ်သို့မဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်နှိုးဆော်မှရှောင်ကြဉ်ပါရန် အလူမီနီယမ်ငွေငါးပိပုံသဏ္damာန်ကိုမထိခိုက်စေပါ။
ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်များ - ငွေပမာဏ၊ ပျံ့နှံ့ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောဖုံးအုပ်နိုင်ခြင်း၊ အမှုန်အရွယ်အစားတူညီမှုကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ချောမွေ့နူးညံ့သောမျက်နှာပြင်၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့် angular color effect နှင့်အပူနှင့်အက်စစ်ခုခံမှုတို့ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - အလူမီနီယမ်ငွေရောင်ငါးပိကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည့်နေရောင်ခြည်နှင့်မိုးရွာစေခြင်းမှကင်းဝေးစေပြီးခြောက်သွေ့သောအခန်း (၃၅ အောက်အောက်) တွင်ထားသင့်သည်။℃) ။ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုအမြန်ဆုံးအသုံးပြုပါ၊ အသုံးပြုပြီးနောက်၊ ၎င်းသည်အရည်နှင့်အပိုပစ္စည်းများ၏မတည်ငြိမ်မှုကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုလုံးဝတံဆိပ်ခတ်သင့်သည်။ ငါးပိခြောက်သွေ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမည်းရောင်နှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းမှရှောင်ရှားရန်။
၁။ ငွေကြွေပြားတုတုတု: အရောင်တောက်ပမှု၊
၂။ Silver flash စီးရီး - ထူးခြားသောမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ထိတွေ့မှုနှင့်သတ္တုအထိခိုက်လွယ်သောတောက်ပမှုတို့နှင့်အတူ၎င်းကိုမော်တော်ကားဆေးသုတ်ခြင်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆေးသုတ်ခြင်း၊ စက်ဘီးဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်စက်မှုဆေးသုတ်ခြင်းတို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
3. Fine silver series - အလွန်ကောင်းမွန်သောအဖြူရောင်၊ စွမ်းအားနှင့်သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
၄။ floating aluminium paste - မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ပလတ်စတစ်၊ silica gel၊ စက္ကူလုပ်ငန်း၊ fluorocarbon ဆေး၊ ပလတ်စတစ်၊ သားရေနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ ထည်ငွေပုံနှိပ်ခြင်း၊
၂။ ၎င်းကိုခြောက်သွေ့သောအခန်း (၃၅ အောက်) တွင်ထားရမည် ℃);
၃။ Aluminum silver pulp သည်အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီနှင့်ခိုင်ခံ့သော oxidant တို့နှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းကြောင့်သီးခြားစီသိမ်းထားသင့်သည်။
4. သိုလှောင်ချိန်သည်မရှည်လွန်းသင့်ပါ။ အဝတ်မခြုံဘဲအသုံးပြုပြီးနောက်၎င်းသည်ဓာတ်တိုးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ချက်ချင်းတံဆိပ်ခတ်သင့်သည်;
၅။ သိုလှောင်ရန်အချိန်ကရှည်လွန်းပါက ကျေးဇူးပြု၍ မသုံးမီစစ်ဆေးပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်သံမဏိစည်ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။
ရှေ့သို့ မြင့်မားသော floating လူမီနီယံ, ငွေငါးပိစျေးနှုန်း
နောက်တစ်ခု: မော်တော်ယာဉ်အမိုးများအတွက်အရည်အသွေးမြင့် floating လူမီနီယံငါးပိ
လူမီနီယမ်ငွေပမာဏ Non Floating Silver, ငါးပိ
မြင့်မားသော Floating လူမီနီယမ်ငွေငါးပိ
Non Floating လူမီနီယမ်ငွေပမာဏ
မြင့်မားသော floating လူမီနီယံ, ငွေငါးပိစျေးနှုန်း
လူမီနီယမ် Paste ဆေးခြယ်မှုန့်, ​​သုတ် Aluminium ...